Dastuurka Qabyada oo Qodobadii Xasaasiga Qaarkood Laga Tirtiray | Anti-Tribalism
← Sheekh Shariif iyo Feysal Cali Waraabe oo Xalay Kulan Gaar ah ku Yeeshay Dubai
Dawlada Turkiga oo Cadeysay Ujeedooyinka Siyaasadeed ee ay Somaliya ka leedahay →
Dastuurka Qabyada oo Qodobadii Xasaasiga Qaarkood Laga Tirtiray
Muqdisho Friday, April 27th, 2012 (MMG) – Ka dib kulamo xiriir ah oo maalmihii u dambeeyey ka socday magaalada Muqdisho ayna wada lahaayeen saraakiisha wasaaradda dastuurka ee DKMG ah iyo guddiga qorida dastuurka ee ay taageerto hay’adda UNDP ayaa Shabakada waxay ogaatay in isbedel lagu sameeyey qaar ka mid ah qodobadii xasaasiyada badan abuuray ee dastuurka qabyada ku jira.
Labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ka socday buuq iyo shirar ay lahaayeen beelaha,siyaasiyiin, aqoonyahano iyo culimo kuwaasoo si isku mid ah u dhaleeceeyey dastuurka cusub. Waxaana wararka xog ogaalka ay sheegayaan in dawladu codsatay in dastuurka laga tirtiro qodobada dadweynuhu ka qeyliyeen.
Qodobada laga bedelay dastuurka waxaa ka mid ah;-
CUTUBKA 9-AAD: Waxaa gebi ahaan la bedelay ee dastuurka oo ka hadlayey shuruuda madaxweynaha kaasoo lagu ku kordhiyey shurudoo cusub, wuxuuna markii hore uu u dhignaa sidan;-
Haddaba sida xogta aan ku helnay waxaa lagu kordhiyey qodobo cusub oo ay ka mid yihiin;-
A- In qofka isu soo sgaraxaya jagada madaxweynaha uu yahay Soomaali.
B- Inuusan horey u guursanhaddana qabin xaas ajnabi ah.
C- Inuu yahay Muslim.
D- Inuusan heysan dhalasho wadan kale.
– Sidoo kale isla qodobkan waxaa lagu kordhiyey “Haddii musharaxa uu horey lahaa dhalasho waddan kale waa inuu ku buriyaa (cancel) mudo lixbilood ugu yaraan, ka hor xilliga musharaxnimadiisa. Waana inuu soo cadeeyaa”.
QODOBKA 12AAD- JINSIYADA: Sidoo kale qodobkan waxaa lagu sameeyey isbedel iyadoo la burburiyey mudada shanta (5) sano ah ee ku xusan in lagu qaadan karo muwaadinimada Soomaaliyeed. Wuxuuna markii hore ahaa sidan;-
Haddaba,xogta ay muujineyso waxaa qodobkan loo daayey in lagu saleeyo sida dasturradii hore ay qabeen, isla markaana la sameeyo sharciqeexaya oo gaar ah waxaana loo dhigay sidan;-
A- Jinsiyada waxay u xafidan tahay sidii ay ahayd dastuuradii hore
B- Waxaa jiri doona sharci gaar ah oo xadeynaya mudada muwaadinimada lagu qaadan karo.
QODOBKA 7AAD- XUDUUDAHA?: Waxaa haatan socda waxka bedel lagu sameynayo qodobka “xuduudaha dalka” oo sida la cadeeyey dastuurka qabyada ah ka maqan, kaasoo sida Raxanreeb loo xaqiijiyey la qeexi doono.
Dhanka kale, waxaa weli dood ka taagan tahay QODOBKA 172AAD ee ka hadlaya “Xadidida waxka bedelka dastuurka” oo ay ku qorneyn in kaliya gobolada Puntland iyo Somaliland codsigooda waxloogabedeli karo dastuurka. Waxaana warar na soo gaaraya ay sheegayaan inay suurtagal tahay in qodobkaasina meesha laga saro sida ay ku doodayaan dadka qaarkood oo u arka qodob dastuurka ka dhigaya mid gobolada dhexe iyo koonfurta kaliya u gaar ah.
Isbedelkan lagu sameeyey qodobada qaar ee dastuurka ayaa yimid maalin ka dib markii golaha wasiirada ay go’aamiyeen in dastuurka qabyada loo bandhigo guddi culimo Soomaaliyeed, kuwaasoo iyaguna la rajeynayo in marka loo geeyo ay ka hadlaan. Waxaana hadalka golaha wasiirada ka horeeyey hadal uu jeediyey madaxweyne Shariif oo sheegay inuu ku talinayo in dibloogu laabto dastuurka.
Waxaana arimahan oo dhan ay dhacayaan xilli loo diyaargaroobayo shirweyne dastuurka ku saabaanoo Muqdisho ka furmi doona illaa labada toddobaad ee fooda nagu soo haya.